9 months, 1 week ago 566 Qoodi
Sudaan Ministeerri Dhimma Alaa Itoophiyaa ibsa Kamisa darbe baase keessatti himannaafi qeeqe isheerratti dhiyaate mormuun deebii kennite.
Ministeerri Dhimma Alaa Sudaan ibsa mata-duree 'Sudaan lafasheerratti birmadummaashee dabarsitee hin kennitu' jedhuun Sambata baaseen, "ibsi Itoophiyaan baaste hariiroo seena-qabeessa biyyoonni lamaan waliin qaban kan ganeefi arrabsoo dhiifamni hin godhamneefidha jechuusaa," maddi oduu biyyattii Suna jedhamu gabaaseera.
Sadaasa darbe Sudaan lafa bajjii qonnaan bultoonni Itoophiyaa irra turan kan kooti jechuun erga fudhatteen booda atakaaroon uumamuun isaa ni yaadata.
Waldhabdeen daangaa biyyoota lamaan gidduutti uumame kun ji'oota kan lakkoofsise yoo ta'u, Itoophiyaan ibsa cimaa baasteen humni waraanaa Sudaan biyyoonni lamaan sababa daangaatiin gara wal loluutti akka seenaniif dubbii hammeessuun kaayyoo qaama sadaffaaf ergamaa jiru jechuun himattee turte.
Sudaan gamasheetiin ibsa Itoophiyaan baste kana, "kan Sudaaniin xiqqeesseefi arrabsoo dhiifamni hin godhamneefu," jechuun balaaleffatteetti.
Ibsi Sudaan baste kun hariiroo seena qabeessa biyyaaota lamaan gidduu ture eeruun, hariiroo kana itti fufsiisuun nageenya, tasgabbiifi misooma dinagdee uummata biyyoota lamaaniif taasisuuf fedhii guddaa akka qabdu mul'iseera.
Muddama dhimma daangaarratti biyyoota lamaan gidduutti uumame tasgabbeessuufi rakkoo kanaaf fala barbaaduuf jilli Gamtaa Afrikaa beekamtii aanga'oota Itoophiyaa argate tokko Kaartuum akka jiru ibsi Sudaan kun dabalee eereera.
Ibsi Sudaanii baate kun naannoon daangaa wal falmisiisaa ta'e lafa Sudaan ta'uu cimsee ibsuun, Itoophiyaan dhimmicha gara qaxanaafi idil-addunyaattillee geessuu dandeessi jedheera.
Itoophiyaan ammoo ibsa Kamisa darbeetiin walitti bu'insi kamiyyu nageenya biyyoota lamaanii kan miidhuufi miidhaa guddaa kan qaqqabsiisudha jetteetti. Damee humna waraanaa Sudaaniin walitti bu'insi afarfamaa jiru "ummata Sudaaniin miidhanii fedhii qaama sadaffaa galmaa'an ga'uudha," jechuun himateera ibsi Itoophiyaan baastee ture kun.
Akka Itoophiyaan jettutti karaawwan gaaffileen daangaa ittiin furamuu danda'an ga'aan jiraatanillee "humni waraanaa Sudaan seera idil-addunyaa cabsuudhaan, Itoophiyaa weeraraniiru".
Dabalataan ammoo faallaa miira micchumaafi jaalalaa biyyoota lamaan gidduu jiruu, "Loltoonni Sudaan qabeenya saamaniiru, kaampii gubaniiru, lammileen Itoophiyaa kumaatamaan lakkaa'aman akka buqqa'an taasisuun kaampiiwwan waraanaa Itoophiyaa qullaa turan to'ataniiru," jechuun himatte Itoophiyaan.
Sudaan gamasheetiin ji'a Guraandhalaama kana keessa loltoonni Itoophiyaa daangaa koo cabsanii seenuun weerara anarratti gaggeessaniiru jechuun karaa Ministeera Dhimma Alaasheetiin himachuun ishee ni yaadatama.
Aanga'oonni ol'aanoo biyyoota lamaanii sababa wal dhabdee daangaatiin gara lolaatti akka hin seenne irra deddeebiin kan ibsan yommuu ta'u, haalli naannoo daangaa jiru garuu muddama keessa ta'uu jiraattonni ni ibsu.
Torban darbe keessa Sudaan ambaasaaddarashee Finfinnee jiran mariidhaaf jechuun waamuunshee kan gabaafame yoo ta'u, kunis dhimma rakkoo daangaa waliin kan walqabate ta'uu wanti beekame hin jiru.
Sudaan Sadaasa darbe naannoowwan daangaa sana hedduu baroota dheeraatiif kan kooti jechaa turte loltootashee itti bobbaasuun kan to'atte yoo ta'u, aanga'oonni biyyattiis lafti isaan to'annoosaanii jala galfatanis qaama lafa seera qabeessa biyyattii ta'uu himu.
Tarkaanfii Sudaan hordofee, Itoophiyaan abbummaan lafaa naannoo daangaa kun gara bakka duraan tureetti akka deebiyuufi biyyoonni lamaanis rakkoo uumame karaa Komishinii Daangaa duraan jalqabamee turee mariidhaa akka furamuu qabu irra deddeebiin gaafachuun ishee ni yaadatama.
Gaanfa Afrikaa Itoophiyaa Sudaan Siyaasa Itoophiyaa